Dowlada Dalka Qatar oo joojisay howlihii safaaradeeda dalka Syria – SBC
Dowlada Dalka Qatar oo joojisay howlihii safaaradeeda dalka Syria
Posted by editor on Julaay 20, 2011 Comments
Doha:- Ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dowladda Qadar ay joojisay howlihii safaaradeeda dalka Syria, xilli safiirkeedii ninka lagu magacaabo Zayed Bin Siciid Al-khiyaariin uu toddobaadkii hore Dowxa dib ugu soo laabtay kadib markii la waxyeeleeyey dhimihii safaaradda Qadar ee magaalada Dimishiq.
Mas’uul katirsan ergeda Qadar ayaa u sheegay wakaaladda AFP in dublumaasiyiinta Qadar ay ka ambabaxeen Syria, islamarkaana howlihii safaaradda la hakiyey ilaa waqti aan la cayimin.
Wargeyska Al-wadan oo ku hadla afka-dowladda Syria ayaa sheegay in safaaradda qadar ee Dimishiq ay joojisay howlaheedii, kadib markii ay dhalinyaro ku hor mudaaharaaday dhismaha safaaradda ee xaafadda Abuu Ramaana ayagoo ka cabanaya qaabka TVga Aljazeera ee laga leeyahay Qadar uu uga warbixinayo dhacdooyinka dalka Syria.
Wargeyska oo soo xiganaya mid kamid shaqaalaha safaaradda Qadar ayaa sheegay in joojinta howsha safaaradda ay la xiriirto sabao amaan awgood kadib markii ay ku tureen dibadbaxayaal safaaradda dhagxaan, Ukun iyo Yaanyo maalnimadii isniinta ee la soo dhaafay iyadoo aanan wax dhiba ah soo gaarin shaqaalaha safaaradda.
Wasaaradda arrimaha dibadda Qadar iyo Syria ayaanan wax bayaan ah ka soo saarin arrinta xiritaanka safaaradda Qadar ee magaalada Dimishiq.
Dowladda Syria ayaa diiday in warbaahinada ajnabiga ay kamid tahay Al-jazeera in ay ka howlgalaan islamrkaana ay soo tabiyaan rabshadaha ka socda dalka Syria.